Somaliland oo taageertay qorsho ka dhan Dowladda Soomaaliya - Awdinle Online
War kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibada ee Somaliland ayaa lagu taageeray qorshaha dowladda Mareykanka ay ugala baxayso ciidankeeda ku sugan Soomaaliya, islamarkaana ay dib ugu celinayso saldhigyada Mareykanka ee Jabuuti iyo Kenya.
Somaliland ayaa sheegtay in ay tahay mid wanaagsan qorshaha uu uga baxayo Soomaaliya taa badalkeeda waxa ay sheegtay in ay soo dhaweyn doonto.
Somaliland ayaa ku faantay in ay gaartay isku filnan ku saabsan dhanka doorashooyinka iyo Ammaanka.
Maraykanka ayaa la sheegay in uu ciidamadiisa kala baxayo Soomaaliya horraanta sanadka soo socda dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa amray Pentagon ka in ciidamadiisa laga saaro Soomaaliya sidda ay lagu shaaciyay war kasoo baxay Wasaaradda Difaaca ee dalka Mareykanka oo lagu faahfaahiyay amarka Madaxweyne Trump.
700 ee askari ee maraykanka ah ee hadda jooga Soomaaliya ayaa dib ugu laaban doona saldhigyo Maraykanku ku leeyahay dalalka Jabuuti iyo Kenya sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga.
Previous articleKhasaaro ka dhashay dagaal ka dhacay Gobolka Mudug
Next articleDigniin laga soo saaray Ayax horleh oo kusoo wajahan Soomaaliya